Tantara - Serivisy ara-dalàna an'ny fanjakana Prairie
1977: Tamin'ny 1 Oktobra, nanomboka nanompo ny mpanjifa tany amin'ny faritra dimy i Prairie State Legal Services, Inc.: Kane, Lake, McLean, Peoria, ary Winnebago.
1977 - 1979: Prairie State dia nanitatra ny faritry ny serivisy, nanampy birao tany Kankakee, Ottawa, Rock Island, ary Wheaton.
taona 1990: Prairie State dia namorona ny Serivisy toro-hevitra an-tariby mba hanondro ny mpanjifa any amin'ny birao eo an-toerana rehefa misy mpisolo vava hisolo tena ny mpanjifa ary hanome mpanjifa bebe kokoa amin'ny torohevitra ara-dalàna mandritra ny fotoana fohy.
2000: Prairie State dia niray tsikombakomba tamin'ny West Central Legal Services Foundation, any Galesburg, ary nanomboka nanompo faritany enina fanampiny.
2009: Ny State Prairie dia niombona tamina programa momba ny fanampiana ara-dalàna an'i Will County, any Joliet, ary nanitatra ny faritry ny serivisy ho an'ny kaomina 36 any avaratra sy afovoan'i Illinois.
2017: Prairie State dia nankalaza ny faha-40 taonany nanome ny fidirana mitovy amin'ny fahamarinana amin'ny fanomezam-boninahitra 40 Heros ho an'ny Justice nandritra ny tantarany. Raha te hahalala bebe kokoa momba ireo mahery fo 40 mahavariana ireo dia vakio ny programa Eto.
Ny Komitin'ny Mpisolovava ho an'ny trano tsara kokoa dia mampiantrano toeram-pitsaboana famehezana fandroahana ao amin'ny CHA Family Investment Center, 4859 South Wabash, any Chicago, IL, ny 16 sy 30 Jona, manomboka amin'ny 5:00 hatramin'ny 8:00 hariva. Misoratra anarana hahita anao raha mahafeno fepetra. Tsy maintsy mamandrika toerana hanaovana fotoana ianao. Mianara bebe kokoa, eto: bit.ly/376O6Ru	... See MoreJereo ny Less
Clinics famehezana famehezana fandroahana LCBH, 26 Mey, 16 & 30 Jona - Sampan-draharaha momba ny lalàna ao Prairie
Ny Komitin'ny Mpisolovava ho an'ny trano tsara kokoa dia mampiantrano toeram-pitsaboana famehezana fandroahana ao amin'ny CHA Family Investment Center, 4859 South Wabash, any Chicago, IL, ny 26 Mey 16 sy 30 Jona, manomboka amin'ny 5:00 hatramin'ny 8:00 hariva. R...